PressReader - Grocott's Mail: 2018-07-20 - Ulut­sha ol­ungama-395 luza kuqala imisebenzi
Ulut­sha ol­ungama-395 luza kuqala imisebenzi
Grocott's Mail - 2018-07-20 - NEWS - NGUTOLAKELE SILO
Iphondo lem­pumakapa likhu­l­ule iqela lokuqala lo­lut­sha eliqe­qeshelwe ukugcina noku­phu­cula amaziko okuseben­zela karhu­lu­mente kum­sitho ububan­jelwe kwin­dawo yokuqe­qeshela ama­joni omkhosi er­hini, isouth African Na­tional De­fence Force (SANDF) 6SAI BN, ngol­we­sine umhla we-12 kweyekhala kun­yaka wama-2018.
Le nkqubo yesebe lenku­lum­buso ibam­bisene NESANDF kwakunye nek­ing Sa­bata Dalindyebo (KSD) TVET Col­lege ijonge ekux­ho­biseni ulut­sha ol­un­ge­nayo ima­triki ukuba lu­fu­mane iza­khono zokugcina amaziko okuseben­zela. Iqala ngo­lut­sha ol­ungama-395, le nkqubo li­phulo le­p­hondo loku­phu­cula lix­ho­bise ngeza­khono ulut­sha ol­ungama-5 000 kwiminyaka emih­lanu. Emva kokux­ho­ty­iswa ngol­wazi iinyanga ez­in­tan­dathu, olu lut­sha luza kubekwa ezikol­weni, ezik­linikhi nasez­ib­hedlele ngeen­jongo zokukhusela iz­into urhu­lu­mente anazo zokuqhuba um­sebenzi.
“Kuhle ukuba ngonyaka wokugqiba ikhulu leminyaka kuka­madiba no­mam’ usisulu kubekho inkqubo enje ngale eye­n­zelwe ukun­qwan­qwada isim­ilo so­lut­sha ukuze lwazi ukuba ukuze lwenze umahluko kwi­ing­ingqi zalo kumele lube luqe­qeshek­ile kwaye lunem­beko,” it­shilo int­loko-jikelele (Ma­jor Gen­eral) YESANDF urudzani Maphanywa ib­hek­isa kwelo qela lo­lut­sha lugqib’ okuqe­qeshwa. Umaphanywa uku­thethe oku ngexe­sha ayala olu lut­sha, es­ongeza ngelithi ma­bancedis­ane norhu­lu­mente ekul­weni ind­lala ejonge um­ntu om­nyama. Inkulu-mbuso yeli phondo, umphathiswa up­hu­mulo Ma­su­alle ukhankanye ukuba nje ngorhu­lu­mente banethemba lokuncedis­ana no­lut­sha ukuba luk­wazi uku­fu­mana imisebenzi. “Nd­i­funa uku­nimemela ukuba siseben­zisane…eli lizwe lelethu, lix­home­keke kuthi ukuba silenze ng­cono,” ut­shilo uma­su­alle ngelixa ekhut­haza abaqe­qeshwa ukuba mabad­lale in­dima kurhu­lu­mente wabo.
Le nkqubo inika ithuba lokuba ulut­sha obelun­ge­naza­khono luqe­qeshwe lub­hatalwa isixa se­mali en­gama-r2 000 ngexe­sha lo­qe­qesho. Oku kwen­zelwa ukuba olu lut­sha luk­wazi ukuqasheka nokuba luk­wazi ukoy­isa ind­lala egubun­gela eli lizwe. Usi­mamkele Ngqoyiya noayab­ulela Qeke nga­banye ba­bantu ababenako ukuthatha in­x­ax­heba kule nkqubo. “Ndiyab­ulela kwaye ndiyavuya ukuba ndithe ndanikwa eli thuba kuba abanye bethu banem­bali en­gent­langa kodwa le nkqubo isinike in­dlela entsha yoku­jonga ubomi, sisazi ukuba um­ntu akaphili yedwa up­hila na­bantu,” ut­shilo u-ayab­ulela Qeke ongummi walapha er­hini. is­lideshow: https://bit.ly/2zvecfu
East­ern Cape Premier Phu­mullo Ma­su­alle speaks dur­ing a brief­ing by Ed­u­ca­tion Depart­ment of­fi­cials at the Army Drill Hall on 12 July. An all-day even cel­e­brated the first in­take send­off cer­e­mony for the gov­ern­ment’s Youth in In­fra­struc­ture Main­te­nance...